K: ပထမ အကြိမ် --- စိုးရွံ့ ပူပန် ခြင်း ---- အီစတာ တနင်္ဂနွေ
ပထမ အကြိမ် --- စိုးရွံ့ ပူပန် ခြင်း ---- အီစတာ တနင်္ဂနွေ
ပထမဆုံး အကြိမ် စင်ပေါ် တက်ခြင်း..ပထမ အကြိမ် နိုင်ငံခြား ခရီး စဉ်... ပထမ ရည်းစား စသည်ဖြင့်.. ဘ၀ မှာ..ပထမ တွေ များ လှ သည်။
များ သော အား ဖြင့် လည်း ..ပထမ အကြိမ် တွေ ဆိုတာ..အဆင် ချော လှ တာ မဟုတ်။ This is not the first time လို့ပင်..ဆို စကား ရှိ သည် မဟုတ် လား ။ ဒါ တောင်..ဖြစ်စဉ် ခြင်း ကတော့..တူတူ ပေမင့်.. ဒီ ဒေသ ဒီ နိုင်ငံ ထဲမှာ မှ..ပထမ အကြိမ် ..ခရီးထွက် ခြင်း.. ပြောင်းလိုက် တဲ့ အလုပ် ထဲ မှာ မှ..ပထမ ဆုံး ရုံးတက်တဲ့ နေ့ ဆိုတာ တွေ လည်း.. ရှိ သေး သည်။
အဲဒီ ပထ မ အခေါက် ဆို တာ တွေ တိုင်း မှာ လည်း.. စိုးရိမ် ပူပန် မူ တွေ..လူတိုင်းမှာ..။ ဘာ တွေ တွေ့ကြုံ ရမယ်.. ဆိုတာ မှ မသိနိုင်ပဲ လေ..။ ကြိုတင် ပြင် ဆင် ထား သလောက် မ ခက် ခဲ သလို..ထင် သလောက် မလွယ် တာ တွေ ကလည်း..ရှိ ခဲ့ ကြ ပေ မည်။ ပြီး တော့လည်း.. အရာ ရာ ဟာ..သူ့ဟာ နဲ့သူ..အသား တကျ ရှိသွား ခဲ့ သည်သာ။ ဖြတ်သန်း ခဲ့ ရတဲ့..ပထမ အကြိမ် တွေ ကို သာ.. နှလုံး နွေး စရာ တွေ .. အသဲ အေး စရာ တွေ.. ရှက် နောင် တ တွေ.. သင်ခန်း စာ တွေ.. အဖြစ် နဲ့ ...သိမ်း ဆည်း ထား လိုက် ပေတော့။
အမေ က..ကျောင်း ဆရာ မ မို့ ..ကျောင်းတက် နေ ရ လို့..အဒေါ် လိုက်ပို့ သော.. ၀လုံးတန်း ( သူငယ် တန်းမရောက်ခင်) အခန်း ငယ် လေး ထဲ က.. ခုံ လေး တွေ ရယ်.. ချော့မော့ လေ့ ရှိ တဲ့..တရုတ် ဆရာ မလေး ရယ်..ကိုသာ..မပီ ၀ိုး ၀ါး... မှတ် မိ တော့ သည်။
ပြည်တွင်း မှာ တနှစ် လောက် လုပ်ခဲ့ သည်။ တွေ့ ရပါ့.. နားမလည် ခြင်း တွေ.. ရှက်စရာ တွေ..အမှား တွေ.. အပုံလိုက်။ အလုပ်ကို ကိုယ် ပြင်ဆင် တာက တခြား.. အင်တာဗျူး ခန်း ထဲ ရောက် မှ..မျက် လုံးစိမ်းစိမ်း နဲ့ ဘို မကြီး တွေ့တော့..လန့်လိုက်တာ။ အိုး မနင်း..ခွက် မနင်း ယုံ လေး ပဲ။ နောက်ထပ်..အလုပ် တွေ..။ ပထမ ဆုံး အလုပ်ဆင်း ခြင်း တွေ။ ဆက်ဆံ ရေး အသစ် တွေ.. ။ အလုပ် သွားဖို့.. ကားလမ်း ကြောင်း အသစ် တွေ။ အခက် အခဲ အသစ် တွေ။ စိုးရိမ် မူ အသစ် တွေ။ ပြီး တော့ လည်း..ပြီး ပြန် တာ ပါပဲ။
အခု လည်း.. ပထမ ဆုံး တခု စီ ခြေ လှမ်း ပြင် မိပြန် ပြီ။ ဖြတ်သန်း ရ ဦး မည်။ စိုး ရိမ် ပူ ပန် ရ ပြန် သည်။ တွေ့ ဆုံ ခြင်း တွေ.. ပြော ဆို ခြင်း တွေ.. လေ့လာမူ တွေ..ရေး ရ ချွတ် ရ မည့် အရေး တွေ။ ပြီး တော့ လည်း .. ရိုးသွား.. ယဉ် ပါး သွား မည့် ကာ လ တခု ကို ရောက် သွား မှာပါ လေ လို့.. ကိုယ့် ဖာသာ အားပေး ပေါ့။
ပထ ဆုံး အကြိမ် တွေ မှာ ကြုံ ရ တတ် တဲ့..ရင်ဖို ခြင်း တွေ အကြောင်း တွေးရင်း.. အီစတာ တနင်္ဂ နွေ ပိတ်ရက် ကို စိတ် ရှိ လက်ရှိ ခံစား နေမိသည်။ အီစတာ ဆို တာ ဘာမှန်း မသိပေမဲ့..အီစတာ တနင်္ဂ နွေ ဆိုတာ တော့.. Good Friday မှာ ကားတိုင် တင် အသတ် ခံ လိုက် ရတဲ့..ခရစ်တော် ယေရှု ..ရှင် ပြန် ထ မြောက် ရာ.. သုံး ရက် မြောက် နေ့ ဆို တာ တော့ သိသည်။ အဲဒီ အချိန် တုန်း ကလည်း..ခရစ် တော် တယောက်..ပထမ ဆုံး အကြိမ်..သေခြင်း တရား..နာခြင်းတရား နှင့် ရင်ဆိုင် ကြုံ တွေ့ ရမည့် အရေး.. ဥယျဉ် ထဲက..သစ်ပင် အောက်မှာ..ညဉ့်ဦးယံ တလျှောက်လုံး.. တယောက် တည်း .. ကြောက်လန့် တုန်လှုပ် နေခဲ့တာ.. Passion ရုပ်ရှင် ထဲ မှာ.. ကြည့်ခဲ့ ရဘူးသည်။ ခု တော့ လည်း.. သူ ရှင်ပြန် ထ မြောက် ခဲ့သည်။ သူ..ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်း ခဲ့ သည်။ ပြီးစရာ တွေ..ပြီး မြောက် သွား ခဲ့ ပေ ပြီ။
( Ester Memorial)
မကေသွယ်ရေ.. ရီးစားထားတာကို ဖရဲသီးဝယ်သလို ဥပမာပေးတော့ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ တချို့ဖရဲသီးတွေက ဆိုင်ပေါ်မှာကတည်းက ခွဲးပြီးသားတွေ။ တချို့ဆို အတုံးလေးတွေတောင် တုံးပြီးသား။ အဲလိုမဟုတ်ရင်လည်း မိန်းမရှာတဲ့အခါ ဖရဲသီးဝယ်သလို သေသေခြာခြာ ခွဲကြည့်ပြီးမှ ၀ယ်ခွင့်ရဖို့ ဆုတောင်းရမလို ဖြစ်နေပြီ။ ဟီး...
နောက်တာနော်အမ ဒီပို့စ်လေးကောင်းတယ်။ ပြန်အမှတ်ရသွားတဲ့ အကြောင်းတွေ အများကြီးပဲ။ ခရစ်တော်အကြောင်းလည်း တွေးမိတယ်။ ကျေးဇူးအမ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ စာလေးဗျာ။ ရသမြောက်ပါတယ်။
သက်ဝေဆီကို လာလည်သွားတာ ကျေးဇူးအထူးပါ။
ဘ၀မှာ များလှတဲ့ ပထမ တွေကို ဒီပိုစ့်လေးကြောင့် ပြန်လည်အမှတ်ရစေခဲ့ပါတယ်။ စာရေးကောင်းတဲ့ ကေသွယ်ရဲ့ပိုစ့်အသစ်တွေ မျှော်နေပါတယ်။
P.S. နောက်တစ်ခါကျရင် ကေသွယ့်ရဲ့ဖရဲသီးလေး အကြောင်းရေးပါလား... :-P
ဆိုင် က..ဖရဲသီး တလုံး ကို.. ဇွန်း လေး နှင့် အပေါက် ဖောက် ၍ သာ..ကြည့် ၀ယ် ခဲ့ ရပေမဲ့.. အိမ် ရောက် မှ ပဲ..အထဲကို ခွဲ ကြည့် နိုင် တာကိုး။ ( အင်း..ခွဲ ကြည့် လို့ ရတော့ လည်း.. ပြီး တော့ လည်း...ပြီးသွား တာပါပဲ )
ပြောတတ်လိုက်တာ မကေ။ အဲဒါကို သဘောကျတယ် ခွိခွိ..။ ခွဲပြီးစိတ်ပြီး မြည်းကြည့်ပြီး ကြိုက်မှဝယ်ရင် ..
ဖရဲသီးကို ထပ်ခွဲမလို့ လုပ်တာ။ အခုမှ မတ်လ တုန်းက တခါ ခွဲထားဖူးတာတွေ့လိုက်လို့ မခွဲဖြစ်တော့ဘူး။ အသက်တွေက ကြီးပြီဆိုတော့ ခွင့်လွှတ်ကွာ။